Linux Deepin: Distribution iray hafa miorina amin'ny Ubuntu miaraka amin'ny Gnome Shell | Avy amin'ny Linux
Linux Deepin: Distribution iray hafa miorina amin'ny Ubuntu miaraka amin'ny Gnome Shell
En webupd8 ny namantsika Andrew dia manao famerenana fizarana miorina amin'ny Ubuntu 11.10 izay tonga amin'ny alàlan'ny Akorandriaka gnome ary miantso ny tenany izy linux deepin.
Ity fizarana ity dia tazomin'ny mpampiasa sinoa ka noho izany dia misy amin'ny teny sinoa sy anglisy izy io, na dia apetraka aza, mazava ho azy, misy fiteny hafa azo ampiana. Mampiditra GnomeShell 3.2.1 ary fanitarana sasany izay manome endrika tsy manam-paharoa ny Desktop Environment. Raha ny marina, raha apetrakao amin'ny farany ambany ny takelaka farany dia ho lazaiko fa izany no izy Windows 7 ????
Deepin Mampiditra andiana fanitarana izy mba hahatratrarana ny fisehony, ny sasany aminy. Miaraka amin'izy rehetra dia azo atao ny vokatr'izany Dash tsy miasa (Afeno Dash) ary ireo latabatra dia aseho amin'ny ankavia, ny mifanohitra amin'ny Akorandriaka gnome. linux deepin USA Zukitwo miaraka amin'ny loko maitso, ary koa ny fanovana miaraka amin'ny tonony mitovy amin'ny Faenza.
Ny teboka iray manohana ity Distribution ity dia ny mampiditra ny azy manokana Ivotoerana rindrambaiko. Ampidiro ny fampiharana toa LibreOffice, Firefox, Thunderbird, GNOME Mplayer, Deadbeef (ny mozika tiako indrindra), Iptux, uGet, Fitaovana GNOME Tweak, ankoatry ny hafa. Izy io koa dia mampiditra codec efa napetraka sy Adobe Flash.
Azonao atao ny maka download linux deepin avy amin'ny Ity rohy ityRaha manao izany izy ireo ary manandrana, dia holazain'izy ireo amiko avy eo hoe nanao ahoana 😀
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Linux Deepin: Distribution iray hafa miorina amin'ny Ubuntu miaraka amin'ny Gnome Shell
Misarika ny saiko izany, hitako ny fomba fiasany amin'ny horonantsary ary toa mandeha tsara izy io, iray andro izao dia andramako izany.
Hanova distro miorina amin'ny ubuntu iray hafa. Nampahatsiahy ahy ny ubuntu.gnome remix akorandriaka, na dia amin'ity tranga ity aza dia mitandrina kokoa ny fisehoany ankoatra ny fananana ny mampiavaka azy mba hahafahana manavaka ny tenany amin'ny ambiny ary mahatonga azy io ho safidy tena mahaliana ny manandrana.
apetrako eo ambany ny tontonana ambony, hoy aho ny windows 7
Azoko atao ny misintona azy amin'ny zavatra roa:
- Miorena amin'ny Winbuntu
- Tsy tena izy io
Hiteny aho fa "distro hafa kokoa" ... saingy hita fa manokana fotoana amin'ny fomba fijery izy ireo ary ho ahy dia omeko isa amin'izany; koa, raha te hanamora ny fifandraisan'ny rafitra Linux miaraka amin'ny mpampiasa ianao, tsara kokoa ny mampiseho azy ireo 'zavatra kely' mahazatra, noho izany ny famindrana ny win7 mankany amin'ity distro ity dia tsy hampijaly raha toa ka izany no kasain'ireo Sinoa ireo .
Ho an'ny maha-Gnome azy dia manintona izy saingy somary windolera ny bara, izay tsy tiako, toy ny kopia hafa
Ampiasaiko izao, tiako be ary izao no distro tiako indrindra 🙂
Tsy ho ela dia ho laharana voalohany amin'ny Distrowatch 😀
Inona no fahafatesan'ny olona may?
Mbola manana fisalasalana lehibe aho ... maninona raha Unity ny ronono dia tsy avy amin'ny distro Ubuntu akorany?
Amiko ny marina dia ny fisehoan'ny linux deepin Hitako fa kanto sy miasa tsara izy io. Ny safidy tsara indrindra dia toa ahy.
Fanontaniana tsara. Tsarovy izany Unity Izy io dia manana tanjona izay tsy mitovy amin'ny Desktop nentim-paharazana, angamba izany no mahatonga ny ambiny amin'ireo fizarana (izay tsy liana ny handrakotra mihoatra ny PC) dia tsy liana amin'ny fampiasana an'io Shell io ..
Marina! Izany no teboka ... toa ahy io fa io no ho teboka mankasitraka an'ireny distros ireny, mitazona birao izay NORONANA hiasa amin'ny PC desktop. Ny tetikasa Luna, ny fototra Mandeha ihany koa io, izay famantarana fa tsy «vondrona-retrograde» isika izay mbola tia mampiasa birao azo ampiharina.
Moa ve ny fiheverana fa "ronono" izany dia midika fa tokony hampiantrano azy ireo disto hafa?
Ny olana amin'ny famindrana ny Unity amin'ny distros hafa dia mety vokatry ny fametahana indray izay nataon'i Canonical an'i Gnome 3. Toa tsy mora toy ny manangona ny kaody ary mampakatra azy any amin'ireo toerana fitahirizam-bokatra ny famindrana azy. Fa… Ny firaisankina dia ronono! Nahita izany ve ianao tamin'ny Ubuntu TV sy Ubuntu ho an'ny Android?
Miaraha-manaiky amin'i Elav sy ny heviny. Izay navoitran'i Elav dia toa marina tokoa amiko ny mahatakatra ny antony mahatonga ny ankamaroantsika manomboka mankafy Unity (taorian'ny fanatsarana ny fitoniana sy ny fikirakirana). Isika izay mahita fahafaha-manao mihoatra ny Desktop, dia tianay ny firaisan-tsaina amin'izay tiana holazaina. Misy zavatra tsy mety ve ao aminy ka tsy torontoronina toy ny ronono? Ny foto-kevitry ny Lens dia toa ronono amiko, ohatra.
Tiako ny fijerin'ny Linux Deepin, toa tsara izany. Ny zavatra hitako, amin'ny hatsarany, hitako fa tsara tarehy kokoa noho ny Kanelina. Hanandrana azy aho hahitako ny fandehany.
Inona no fahafatesan'ny olona may? TDE?
Noho ny famoizam-po, Tina, famoizam-po ...
Lazao amiko avy eo ... hongotako ireo taovolo sisa tavela ... Maty may ve izy ireo? 😀
ianao io dia hoy izy:
Salama re olona.
Io no hatsarana tsara indrindra hitanao hatrizay, manana mozika sy mpilalao horonantsary manokana ianao izay noforonina tsara tamin'ny endrika matihanina, eo amin'ny làlana tsara no ilazako azy fa mifaninana mivantana amin'ny LINUX MINT miaraka amin'ny CINNAMON, izao dia izaho manoratra avy amin'i LINUX DEEPIN, ka fantatro fa manamora kokoa ny mpampiasa tonga avy any an-dafy ity, arahabaina ny CHINESE ………… MERCA…
Hamaky bebe kokoa: http://espanol.17style.com/#ixzz28zVEXNE6
Mamaly an'i erestu
Namaky momba izany aho tamin'ny Desambra, tao amin'ny OMG! Ubuntu! Ary avy amin'izay hitako fa manana ivon-rindrambaiko tsara tarehy izy (azo sintonina sy apetraka amin'ny Debian / Ubuntu, heveriko fa hoy ny pejy ofisialin'izy ireo).
Misy mahalala ve hoe maninona no tsy mivoaka toy ny ubuntu ny hevitro, ary mivoaka amin'ny tux?
Ovao ny UserAgent
Satria tsy manana ny User Agent voalamina tsara ianao .. 😛
pod fa efa nanandrana izany mihoatra ny indray mandeha aho ary tsy nisy nahavita nanamboatra an'io mpampiasa mpampiasa io
Izy io dia mamantatra wifi avy amin'ny broadcom ary tplink roa miaraka indray rehefa mandefa boot tsy toa ny xubuntu izay mampiseho boaty fifanakalozan-kevitra hamelomana azy ary milanja latsaky ny 700 MB
Misy mivantana isan'andro (amin'ny anglisyhttp: //cdimage.linuxdeepin.com/daily-live/desktop-en/
Valiny tamin'i Linukz
igus dia hoy izy:
Hey azafady, apetraho ubuntu 11.10 fa tsy miditra ny rafitra ubuntu, ny gnome klasika ihany na ilay tsy misy effets, apetaho ho shell, azonao atao ve ny milaza amiko na manampy ahy tsy mahomby amin'ny pc-ko, dia ilay optika optika 2.8 misy 1gb an'ny ram, tena tadiaviko ho an'ny akorandriaka izany satria hametraka lamina maromaro efa ao anaty aho handrindrana ny zava-drehetra hiditra amin'ny ssh avy amin'ny pc hafa ary milaza amiko fa mandà ny fakany sy ny làlan'ny mpampiasa izany ary niezaka nanala firewall aho ary tsy nisy na inona na inona. fa tsy manokatra ny fidirana amiko io, na dia graxias fidiran'ny mpizara aza
Mieritreritra aho fa hamerina mamaky gnu / linux 6.0 izay tsy nahomby tamiko 🙂
Mamaly an'i igus
buhoteca dia hoy izy:
Famerenana amin'ny Espaniôla an'ny Linux Deepin 2014.2 https://www.youtube.com/watch?v=g6FULXArOHQ
Mamaly an'i buhoteca
OS X vs Linux: ny ady farany